Kenya oo xukun ku riday dad loo haystay weerarkii Westgate Mall | Dhacdo
Kenya oo xukun ku riday dad loo haystay weerarkii Westgate Mall
Garsoore ku sugan dalka Kenya ayaa xukun 18 sano iyo 33 sano oo xarig ah ku riday laba qof oo ku eedeysnaa iney gacan siiyeen kooxa islaamiyiin hubeysan oo 2013-ki weerar ku qaaday dhismaha ganacsiga ee Wastgate ee laga dukaameysto oo ku yaalla magaalada Nairbi.
Weerarka ay koox hubeysneyd oo ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku qaadeen suuqa Westgate ee ku yaalla bartmaha magaalada Nairobi waxaa ku dhintay 67 qof.
Dowladda Kenya xilliga weerarkaasi la soo afjarayna waxay sheegtay 4 ka mid ah dableydii weerarka soo qaadday in halkaasi lagu dilay.
Dableyda weerarka soo qaadday ayaa dhismaha ganacsiga ee Wastgate haysatay afar maalmood, weerarkaasi oo lagu sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee Kenya ka dhaca.
Xukunkan ay maxkamaddu ridday ayaa ahaa kii ugu horreeyey oo ay maxkamad ka soo saarto weerarka Westgate.
Eedeysanayaasha oo seddex toddobaad ka hor dambiga lagu helay, maxkamadda dacwadda qaadeysay waxay sii deysay Liibaan C/llaahi Cumar oo wax dambi ah lagu wayey.
Xubinka seddexaad ee dacwadda kula jiray Liibana C/llaahi Cumar marki dambi lagu waayey ayey maxkamaddu si daysay. Ninkan dambiga lagu waayey oo ahaa qoxooti reer Soomaaliya ah dambiga kale ee lagu soo oogay oo ahaa inuu sharci darra uu ku joogay Kenya uuna adeegsanayo dokumati been abuur ahna sida oo kale waa lagu waayey.
Dad sii deyntiisa goob joog u ahaa waxay sheegeen marki xubinkan seddexaad dambi lagu waayey oo la sii daayey, rag hubeysan iney taxigi uu saarnaa ay joojiyeen kaddibna ay kaxeysteen, wixi intaa ka dambeeyeyna aan la arag.